न्यूज सञ्जाल: » झापामा एकातिर सम्बन्धविच्छेद, अर्कोतिर बहुविवाह !
झापामा एकातिर सम्बन्धविच्छेद, अर्कोतिर बहुविवाह !
न्यूज सञ्जाल ९ आश्विन २०७६, बिहीबार १९:४१
झापा । झापा गोलधापकी एक युवतीले दुई वर्षअघि पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरिन् । घरेलु हिंसामा परेकी उनी सम्बन्ध विच्छेदपछि एक्लै जिन्दगी बिताउने योजनामा थिइन् । तर, एक सवारी चालकसँगको उनको सम्बन्ध छोटो समयमै बिहेमा बदलियो । पछि थाहा पाइन्, मन पराएर बिहे गरेको मान्छेको पहिल्यै घरजम भइसकेको रहेछ । उनीसहित पतिलाई जेठी पत्नीले बहुविवाह मुद्दा दायर गरिन् । अहिले उनले पतिसँगै मुद्दा खेपिरहेकी छिन् ।
यो प्रतिनिधि घटना हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि अपराध ९संहिता० २०७४ लागू भएपछि जिल्ला अदालत झापामा यस किसिमका बहुविवाहका मुद्दा बढिरहेका छन् । गतवर्ष भदौ १ बाट नयाँ कानुन लागू भएयता सम्बन्धविच्छेद गरेर बिहे गरेका महिलामाथि बहुविवाहको मुद्दा बढेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद खनालले जानकारी दिए । अपराध संहिताले विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न नहुने र विवाहित पुरुष हो भन्ने जानीजानी पनि त्यस्तो पुरुषसँग बिहे गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
‘यसरी बिहे गर्ने पुरुष या महिलालाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने र त्यस्तो बिहे स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ’, खनालले भने । विवाहित पुरुषले ‘अविवाहित हुँ’ भनी झुक्याई कुनै महिलासँग बिहे गरी ल्याउने पुरुषसँग महिलाले क्षतिपूर्तिसमेत माग गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ । जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा कतिपयलाई झुक्याएर बिहे गरेको देखिन्छ भने कतिपय पहिलो श्रीमती भएको थाहा हुँदाहुँदै राजीखुसी आएको पनि देखिएको छ ।
गतवर्ष बहुविवाहका ५० मुद्दा दर्ता भएको अदालतको तथ्यांक छ, जसमा २४ फैसला भए । २६ विचाराधीन छन् । त्यसै वर्ष सम्बन्धविच्छेदका १ हजार १ सय ६५ मुद्दा दर्ता थिए । ७ सय ९९ फैसला भए । ३ सय ६६ मुद्दा विचाराधीन छन् । अघिल्लो वर्ष २०७४/७५ मा बहुविवाहका ३८ मुद्दा दर्ता थिए । २३ फैसला भएका थिए । सम्बन्धविच्छेदका ९ सय १० मुद्दा दर्ता भएकोमा ६ सय ८२ मुद्दा फैसला भएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा बहुविवाहका दुई र सम्बन्धविच्छेदका १ सय ६ मुद्दा छन् । पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेदसँगै बहुविवाहका मुद्दाको चाप अदालतमा बढेको अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘पतिपत्नीबीच विचार नमिल्नेलगायत विविध कारणले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘सम्बन्धविच्छेदपछि अर्कै पुरुषसँग बिहे गरेका महिला पछि बहुविवाहमा फस्ने क्रम पनि देखिएको छ ।’ कान्तिपुर अनलाइनबाट